၁။ သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၂။ သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်ရင်စားတာပါ။ ၃။ သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းစားသုံးပေးပါ။ ၄။ သင့်ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရေများများသောက်ပြီး၊ ညဘက်မှာ ရေလျှော့သောက်ပါ။ …
သင့် နှုတ်ခမ်းပုံစံက ပြောတဲ့ ပင်ကိုစရိုက်
လူတွေက အလှအပနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်တိုင်း မကျပါဘူး။ လှပြီးရင်း လှချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှတယ်လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။ မျက်နှာသွင်ပြင်ကလည်း ပင်ကိုစရိုက်ကို ဖော်ပြနိုင်သလို နှုတ်ခမ်းကလည်း သင့်ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ကြီးမားသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေး ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ပြေးမြင်မိတာက Angelina …
အရပ်ရှည်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ပိုပြီး ချစ်တတ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
အရပ်ရှည်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ပိုပြီး ချစ်တတ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ မိန်းကလေး တော်တော်များများရဲ့ အကြိုက်ကို ပြောပါဆိုရင် အရပ်ရှည်တဲ့ ယောက်ျားလေး ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ စုံတွဲ တော်တော် များများမှာ ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေး ထက် ပိုပြီး အရပ် ရှည်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ… သုတေသန တော်တော် များများရဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်ချက် အရ …
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုး (မတ်စေ့ ပုံပြင်)
ဒီစာစောင်ကို မိန်းကလေး အားလုံးကို ဖတ်စေ ချင်ပါတယ်.. ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို ခေါ်ပြီး ပြောတာကနေ စကြရအောင်…. ဖခင် = အဖေ သမီးကို တစ်ခု ပြမယ်. အရေးကြီးတယ်နော်.. ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တစ်စုံတစ်ခုကို အင်္ကျီအိပ်ထဲက နှိုက်ပြီး လက်ထဲ ဆုပ်ကိုင် ထားလိုက်ပါတယ်။ ဘာလဲ ဆိုတာ သိချင်လား …
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လေယာဉ်တစ်စီး လမ်းချော်၊ လေယာဉ် ၃ ပိုင်းကျိုး၊ ပြေးလမ်းပိတ်ပြီး ခရီးသည်များ သောင်တင် ရန်ကုန်၊ မေ ၈ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည် ၄၀ ဦးခန့်လိုက်ပါသော လေယာဉ်တစ်စီး လမ်းချော်ပြီး လေယာဉ်ပျက်စီးကာ လေယာဉ်မှူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း မဂ်လာဒုံမြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကပြောကြားသည် “လေယာဉ်လမ်းချော်တာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ခရီးသည်က ၄၀ လောက်ပါတယ်ပြောတယ်။ …
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ ပညာခွင် အတိုင်း မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ ချိန်ဆ ဆင်ခြင် နိုင်ရန် ဟောကြား ထားတဲ့ ဆရာ ဇင်ယော်နီရဲ့ 2019 မေလ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက် ထိ ၁ ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း လေးပါ…. မိတ်ဆွေ အားလုံး တို့ရဲ့ ကံ …
ထိုင်း အဆိုတော်အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်ဖော် သစ္စာရှိလွန်းလို့ ဘတ်ငွေ တစ်သန်း (သိန်း၄၇၀) ဆုချခံရ May 8,2019 သစ္စာရဲ့ တန်ဖိုးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ စိတ်ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးပါ ဆုချတဲ့ အဆိုတော်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ သစ္စာရှိပြီး သိတတ်တဲ့ အိမ်ဖော်မလေးကိုလည်း ချီးကျူးဂုဏ်ယူပြီး ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီး …
မင်္ဂလာဒုံ​လေယာဉ်​ကွင်းတွင်​ ​ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရ်​ ​လေယာဉ်​ လေယာဉ်​​ပြေးလမ်း​ချော်​မှုဖြစ်ပွါးပြီး လေယာဉ်​ခါးသုံးပိုင်းကျိုးဟုကနဦးသတင်းရ အထူးသတင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် ဘီမန်လေယာဉ်ပျံအဆင်းCargo Terminal နားမှာ လမ်းချော်လို့ လေယာဉ်သုံးပိုင်း ခေါက်သွာတယ် လေယာဉ်မှုး ခေါင်းပေါက်သွားပေမယ့် ခရီးသည်တွေအန္တရာယ် မဖြစ်ဘူးလို့ကြားရတယ် တီဂျီ ဘန်ကောက်အပြန် နဲ့ တခြားလေယာဉ်တွေပျံတက်ဖို့ လောလောဆယ် ပြေးလမ်းပိတ်နေတယ် ဆင်းလာမယ့်လေယာဉ်တွေ လမ်းခွဲပြီး တခြားလေဆိပ်ကိုဦးတည်နေကြပါတယ် ဒီညအဖို့ ပြည်တွင်းလေယာဉ်တွေက နေပြည်တော်ကိုပြန်လှည့်သွားကြပြီး …
ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ မြန်မာစကားနဲ့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ဂျက်ကီချန်း ဗွီဒီယိုဖိုင် ကမ္ဘာကျော် စတန့်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဟာဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိတ်သတ်တွေ အများအပြားရရှိထားတဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ ဂျက်ကီချန်းဟာ ဟောလိဝုဒ် ကြေးအကြီးဆုံး မင်းသားတွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ငယ်စဉ်က သိုင်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှာ Bruce Lee မင်းသားကြီးကို အားကျမိလို့ ကြိုးစားရင်းက အခုဆို ကမ္ဘာကျော်စတန့်မင်းသားကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ ဂျက်ဟာ အောင်မြင်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ …
ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့သူတွေကသာ ဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိကြောင်း သုတေသီတွေက လေ့လာ တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဇနီးသည်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လိမ်လည်ပြီး သစ္စာဖောက် တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ခိုးဖွက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်က ဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျပြီး၊ ဦးနှောက်စွမ်းဆောာင်ရည်နိမ့်ပါးတတ်သူတွေဖြစ်ကြောင်း လန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ဆက်တိုရှီ ကန်နာဇာဝါရဲ့ လေ့လာသုတေသနပြုအချက်အလက်တွေအရ တွေ့ရှိခဲ့ရ ပါတယ်… ဆိုရှယ်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသားအများစုကို လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ချက်အရ အမျိုးသမီးအဖော်နောက်ကွယ်မှာ လိမ်လည်ခြင်း၊ …